ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ဘယ်လိုနေရာတွေမှာ ကြွက်သားဒဏ်ဖြစ်တတ်သလဲ | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ဘယ်လိုနေရာတွေမှာ ကြွက်သားဒဏ်ဖြစ်တတ်သလဲ
ကြွက်သားဒဏ်ဖြစ်တာက မကြာခဏ ထိခိုက်မိတဲ့ ကြွက်သား၊ အရွတ်၊ အဆစ် စတာတွေမှာ ဖြစ်လေ့ရှိပြီး များသောအားဖြင့် ပုခုံး၊ တံတောင်၊ လက်ကောက်ဝတ် စတဲ့နေရာတွေမှာ တွေ့ရတတ်ပါတယ်။
ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အခြားဖြစ်တတ်တဲ့ နေရာတွေကတော့ -
1. လက်ကောက်ဝတ်မှာရှိတဲ့ carpel tunnel ခေါ် လိုဏ်ခေါင်းထဲ ဖြတ်သွားတဲ့ အာရုံကြောတစ်ကြော ထိခိုက်မိတာကြောင့် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ (Carpel tunnel syndrome)
2. လက်ကောက်ဝတ် အရွတ်နာခြင်း
1. Golfer’s elbow လို့ခေါ်တဲ့ ဂေါက်ရိုက်သူတွေမှာ အတွေ့များတဲ့ဒဏ် (တံတောင်မှာရှိတဲ့ medial epicondyle အတက်ကလေးမှာတွယ်နေတဲ့ အရွတ်ရောင်ခြင်း)
2. Tennis elbow လို့ခေါ်တဲ့ တင်းနစ်ရိုက်သူတွေမှာအတွေ့များတဲ့ဒဏ် (တံတောင်မှာရှိတဲ့ lateral epicondyle အတက်ကလေးမှာတွယ်နေတဲ့ အရွတ်ရောင်ခြင်း)
1. ပခုံးမှာရောင်လာပြီး ပုခုံးလှုပ်ရှားမှုထိန်းအရွတ်နဲ့ အရည်အိတ်ကို ဒဏ်ဖြစ်စေခြင်း (Impingement syndrome)
1. အရွတ်မြက်ခြင်း (တင်ပါးပေါင်ရင်းအရိုးမှာ အရွတ်ညှပ်နေပြီး လှုပ်ရှားလိုက်တိုင်း မျက်ခနဲဖြစ်နေခြင်း) (Snapping hip syndrome)
2. အရွတ်ကလှုပ်ရှားလိုက်တိုင်း အရည်အိတ် ရောင်ရမ်းနေခြင်း (Bursitis of the hip)
Alaxan IA (1)
1. အရိုးအပေါ် အနားမလပ် အကြာကြီး ဒဏ်ပိခြင်းကြောင့် အရိုးကျိုးခြင်း (Stress fracture)
2. ခြေထောက်အရှေ့ပိုင်းတစ်လျှောက် နာကျင်ခြင်း (Shin splits)
3. ဒူးဆစ်အောက် အရိုးနုနာကျင်ခြင်း (Condromalacia)
1. ခြေဖနောင့်ကြောရောင်ရမ်းခြင်း (Tendonitis of the achilles tendon)
2. အပေါ်က Carpal tunnel syndrome လိုမျိုး ခြေထောက်မှာ ဖြစ်ခြင်း (Tarsal tunnel syndrome)
3. ခြေထောက်အနောက်ဘက် အရွတ်ရောင်ခြင်းကြောင့် ခြေထောက်နဲ့ ခြေဖနောင့် အတွင်းဘက်နာကျင်ခြင်း (Posterior tibial tendonitis)
Dr. Mya PhooNgon (www.drmyanmar.com)
Alaxan IA (2)
ႂကြက္သားဒဏ္ျဖစ္တာက မၾကာခဏ ထိခိုက္မိတဲ့ ႂကြက္သား၊ အရြတ္၊ အဆစ္ စတာေတြမွာ ျဖစ္ေလ့ရွိၿပီး မ်ားေသာအားျဖင့္ ပုခုံး၊ တံေတာင္၊ လက္ေကာက္ဝတ္ စတဲ့ေနရာေတြမွာ ေတြ႕ရတတ္ပါတယ္။
ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕ အျခားျဖစ္တတ္တဲ့ ေနရာေတြကေတာ့ -
လက္ေကာက္ဝတ္မွာရွိတဲ့ carpel tunnel ေခၚ လိုဏ္ေခါင္းထဲ ျဖတ္သြားတဲ့ အာ႐ုံေၾကာတစ္ေၾကာ ထိခိုက္မိတာေၾကာင့္ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ (Carpel tunnel syndrome)
Golfer’s elbow လို႔ေခၚတဲ့ ေဂါက္႐ိုက္သူေတြမွာ အေတြ႕မ်ားတဲ့ဒဏ္ (တံေတာင္မွာရွိတ့ဲ medial epicondyle အတက္ကေလးမွာတြယ္ေနတဲ့ အ႐ြတ္ေရာင္ျခင္း)
Tennis elbow လို႔ေခၚတဲ့ တင္းနစ္႐ိုက္သူေတြမွာအေတြ႕မ်ားတဲ့ဒဏ္ (တံေတာင္မွာရွိတဲ့ lateral epicondyle အတက္ကေလးမွာတြယ္ေနတဲ့ အ႐ြတ္ေရာင္ျခင္း)
ပခုံးမွာေရာင္လာၿပီး ပုခုံးလႈပ္ရွားမႈထိန္းအရြတ္နဲ႔ အရည္အိတ္ကို ဒဏ္ျဖစ္ေစျခင္း (Impingement syndrome)
အရြတ္ျမက္ျခင္း (တင္ပါးေပါင္ရင္းအ႐ိုးမွာ အရြတ္ညႇပ္ေနၿပီး လႈပ္ရွားလိုက္တိုင္း မ်က္ခနဲျဖစ္ေနျခင္း) (Snapping hip syndrome)
အ႐ြတ္ကလႈပ္ရွားလိုက္တိုင္း အရည္အိတ္ ေရာင္ရမ္းေနျခင္း (Bursitis of the hip)
အ႐ိုးအေပၚ အနားမလပ္ အၾကာႀကီး ဒဏ္ပိျခင္းေၾကာင့္ အ႐ိုးက်ိဳးျခင္း (Stress fracture)
ေျခေထာက္အေရွ႕ပိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ နာက်င္ျခင္း (Shin splits)
ဒူးဆစ္ေအာက္ အ႐ိုးႏုနာက်င္ျခင္း (Condromalacia)
ေျခဖေနာင့္ေၾကာေရာင္ရမ္းျခင္း (Tendonitis of the achilles tendon)
အေပၚက Carpal tunnel syndrome လိုမ်ိဳး ေျခေထာက္မွာ ျဖစ္ျခင္း (Tarsal tunnel syndrome)
ေျခေထာက္အေနာက္ဘက္ အရြတ္ေရာင္ျခင္းေၾကာင့္ ေျခေထာက္နဲ႔ ေျခဖေနာင့္ အတြင္းဘက္နာက်င္ျခင္း (Posterior tibial tendonitis)
Covid-19 ကို ကာကွယ်ထိန်းချုပ်နိုင်မည့်ဆေးဝါးများ
၃.၄.၂ဝ၂ဝ | ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာဗဟုသုတများ
အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ အကြီးစားဆေး Company ကြီးတွေနဲ့ ဇီဝနည်းပညာ Company ကြီးတွေဟာ အခုဆိုရင် Covid-19 ကို တိုက်ဖျက်နိုင်မယ့် အစွမ်းထက်ကုသနည်းတွေကို အပူတပြင်း စူးစမ်းရှာဖွေလျက် ရှိနေကြပါတယ်။
ထိပ်တန်း Company ပေါင်းများစွာကလည်း ကာကွယ်ဆေးကို အပြိုင်အဆိုင် ဖော်ထုတ်နေကြတာဖြစ်ပြီး Drug Giant Johnson...
Johnson & Johnson Company ကြီးက စက်တင်ဘာလတွင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကာကွယ်ဆေးကို စတင်စမ်းသပ်ဖို့ ကြိုးစား
ကမ္ဘာတွင် အောင်မြင်ကျော်ကြားလျက်ရှိသော ဆေးဝါးထုတ်လုပ်တဲ့ Company ကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Johnson & Johnson ဟာ Covid-19 အတွက် ကာကွယ်ဆေး ပထမအသုတ်ကို ၂၀၂၁ အစောပိုင်းကာလမှာ အရေးပေါ်အခြေအနေများအတွက် အသုံးပြုနိုင်ဖို့ စတင်ထုတ်လုပ်တော့မှာဖြစ်ပြီး လာမယ့် စက်တင်ဘာလမှာ လူသားတွေနဲ့ စတင်စမ်းသပ်တော့မှာ ဖြစ်တယ်လိ...